अयोध्या, ओली र अयोध्यापुरी | चितवन पोष्ट
अयोध्या भारतको उत्तर प्रदेश प्रान्तको फैजाबाद जिल्लामा पर्दछ । प्राचीनकालमा अयोध्यालाई कौशल देश भनिन्थ्यो । अयोध्या हिन्दुहरुको प्राचीन र सात पवित्र तीर्थस्थलहरुमा एक हो । अथर्ववेदमा अयोध्यालाई ईश्वरको नगर भनिएको छ । रामायणका अनुसार अयोध्याको स्थापना मनुले गरेका थिए । धेरै शताब्दीसम्म यो नगर सूर्यवंशी राजाहरुको राजधानी रहन गयो । अयोध्या मूलरुपमा मन्दिरहरुको सहर हो । यहाँ हिन्दु, बौद्ध र जैन धर्मबाट निर्माण भएका अवशेष हेर्न सकिन्छ । जैन मतका अनुसार यहाँ आदिनाथसहित पाँच तीर्थकरहरुको जन्म भएको थियो ।
अयोध्यामा पछिल्ला वर्षमा बाबरी मस्जिद र राम मन्दिरको बारेमा विवाद हुन गयो । अहिले उच्च न्यायालयको फैसलाबाट राम मन्दिर भएको छ । वाल्मीकिले रामायणमा उल्लेख गरेको मौखिक दस्तावेजहरुको आधारमा अयोध्या भनिँदै आएको हो । अयोध्या साहित्यिक प्रमाणमा आधारित छ । तर, पुराता¤िवक प्रमाण नहुँदा उत्तर प्रदेशको अयोध्या रामको जन्मभूमि नै हो भन्ने कुरामा वर्षौंदेखि विवाद छ । तर, मंगोलिया, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाली लोककथाले उत्तर प्रदेशको अयोध्या नै रामको जन्मभूमि हो भन्ने तर्कलाई समर्थन गरेको छ । सन् १९७५ देखि नै रामायणमा वर्णित स्थलको खोज, अनुसन्धान र उत्खनन गरिएको भए पनि इशापूर्व सातौँ शताब्दीभन्दा उता मानव सभ्यताको कुनै अवशेष फेला परेनन् । ती क्षेत्रमा बुद्धको युगभन्दा दुई सय वर्ष पहिलेदेखिमात्रै मानवबस्तीको विकास भएका अवशेषहरु पाइए । यस हिसाबले अयोध्या नगरी इशापूर्व सातौँ शताब्दीतिर विकास भएको हुन सक्ने अड्कल गरिन्छ ।
हिन्दु पौराणिक इतिहासअनुसार भगवान् श्रीराम सूर्यकै वंश भएकाले सूर्यवंशी भनिएको रहेछ । पौराणिक इतिहासमै वर्णित भारतका पवित्र सप्तपुरीमा अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, काँची, उज्जयिनी र द्वारका उल्लेख छ । अथर्ववेदमा अयोध्यालाई ‘ईश्वरको नगर’ भनिएको छ । स्कन्द पुराणले ‘अ’कार ब्रह्मा, ‘य’कार विष्णु तथा ‘ध’कारलाई रूद्रको स्वरुपमा अर्थाएको छ । जैन मतका अनुसार अयोध्यामै आदिनाथसहित पाँच तीर्थकरको जन्म भएको थियो । २४ तीर्थकरमध्ये २२ जना त इक्ष्वाकु कुलकै रहेछन्, जुन कुलमै रामको जन्म भएको हो ।
रामायणका अनुसार सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु राजाले नै अयोध्या नगरी स्थापना गरेका थिए । मनु राजा ब्रह्माजीकै हाँगा हुन् । वंश वर्णनअनुसार ब्रह्माजीका पुत्र मरीचिबाट कश्यपको जन्म भयो, कश्यपबाट विवस्वान (सूर्य) अनि विवस्वानबाट वैवस्वत मनु । मनु राजाका दस पुत्र भए, उनीहरु थिए– इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यन्त, करूष, महाबली, शर्याती र पृषथ । यी दस पुत्रमध्ये इक्ष्वाकुकै वंश धेरै विस्तार भयो । इक्ष्वाकु कुलमै जन्मिएका हुन्, भगवान् श्रीराम । रामका पिता दशरथ यो वंशका ६३औँ राजा रहेछन् । रामायणमा वर्णित पौराणिककाल गणनालाई थाती राखेर शोधकर्ता र पुरात¤वविद्हरुको मतलाई आधार मान्दा इशापूर्व करिब २७ सय वर्षतिर अयोध्या नगरी स्थापना भएको अनुमान छ । यदि यसो हो भने के त्यतिबेला नेपालको ठोरीको अयोध्यालाई ओझेलमा पार्नकै लागि या सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्नकै लागि त्यहाँ कसैले नक्कली अयोध्या खडा गरेको होला त ?
रामायणका अनुसार राम त्रेतायुगका मर्यादा पुरूषोत्तम हुन् । युगको पनि निश्चित आयु हुन्छ । त्रेतायुगको आयु १२ लाख ९६ हजार वर्ष रहेछ । त्रेता र कलियुगको बीचमा आउँछ द्वापरयुग, जुन युगको आयु ८ लाख ६४ हजार वर्ष रहेछ । द्वापरयुग बितेर पनि कलियुगका पाँच हजार वर्ष बितिसकेका छन् । रामलाई त्रेतायुगका उत्तरार्धतिरका राजा मान्ने हो भने पनि राम यो धर्तीमा जन्मिएको अहिले करिब १० लाख वर्ष बितिसकेछ ।
सो क्षेत्र बुद्धकालदेखि नै शाक्यमुनि बुद्धसँग सम्बन्धित थियो । उत्खनन गर्दा त्यहाँ बुद्धका ढुङ्गे मूर्ति तथा अन्य धेरै बुद्धकालीन सामग्री फेला परेका छन्, जसले सो स्थान बुद्धसँग सम्बद्ध भएको प्रमाणित गर्दछ । यही बुद्ध तीर्थस्थलमा सन् १६०० तिर मुगल राजकुमार बाबरले मस्जिद बनाए, जसलाई बाबरी मस्जिद भनियो । सो क्षेत्रका हिन्दुहरुले ११औँ शताब्दीदेखि नै कायम रहेको आफ्नो राम मन्दिर तोडेर बाबरले मस्जिद बनाएका हुन् भन्ने आरोप लगाउँदै ६ डिसेम्बर १९९२ मा बाबरी मस्जिद ध्वस्त पारिदिए । अहिले सो क्षेत्र बौद्ध, हिन्दु र शिख समुदायकै आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ । वास्तवमा सो स्थानमा राम मन्दिर थिएन । यो नितान्त राजनीतिक प्रेरित दाबी थियो । कालन्तरदेखि नै फैजाबाद बुद्ध धर्मावलम्बीकै तीर्थस्थल थियो । सो स्थान उपरको बुद्धमार्गीहरुको दाबी र विरोध अहिलेसम्म कायमै छ । अदालतले पनि भारतको अयोध्यामा राम जन्मेको भन्ने विषयलाई अहिलेसम्म स्वीकार्न सकेको छैन ।
मुजफ्फरपुरस्थित वैशाली र भारतीयहरुले मानेको अयोध्या वा फैजाबाद बुद्धकाल मै बुद्ध गयाजस्तै बुद्धिस्टहरुको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनिसकेको थियो । यसले पनि रामको जन्मभूमि ठोरीस्थित अयोध्या नै हो कि भन्ने जनाउँछ । दशरथको पालामा त विदेह राज्य मिथिला नामले प्रसिद्ध थियो । जसको सिमाना पूर्वमा कौशिकी नदी, पश्चिममा शालिग्राम वा कालीगण्डकी नदी, उत्तरमा हिमालय पर्वत र दक्षिणमा गंगा नदीसम्म थियो । यस आधारले पनि दशरथले राज्य गरेको अयोध्या मिथिला राज्य क्षेत्रअन्तर्गतकै तत्कालको अलग्गै राज्य अयोध्यापुरी हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अयोध्या राज्यको स्थापना अयोध्याको नामबाट नभई मध्यदेशको नामबाट भएको मानिन्छ । मध्यदेशका बासिन्दाले ईपू २५०० तिरै आर्य समुदायका मनुलाई आफ्नो पहिलो राजा छनोट गरे । भारतीय इतिहासविद्हरुले मनुलाई पहिलो प्रमाणित राजा र उनको ९४औँ पुस्तासम्मको वंशावलीलाई अहिलेसम्मकै पूर्ण राज राजवंशावली मानेका छन् । धेरैपछिका पिँढीले मध्यदेशको राजधानी अयोध्या भनी प्रचारमा ल्याए । अहिलेको वीरगन्जदेखि भैरहवासम्मको क्षेत्रलाई मध्य तराई वा मध्यदेश भनिन्थ्यो । यस आधारले मनुले शासन गरेको मध्यदेश अहिले चर्चामा आएको माडी क्षेत्र नै हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आर्यवर्त क्षेत्र मध्य भारतको विन्दाचल पर्वत उत्तर, हिमालय पर्वत दक्षिण, सिन्धु नदी पूर्व र ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिमको विशाल क्षेत्र मानिन्थ्यो । यही क्षेत्रभित्रको नेपालको हिमवत् खण्डको कौशिकी किनारको बराह क्षेत्रदेखि देउघाटस्थित वाल्मीकि आश्रम हुँदै मुक्तिनाथसम्मको भाग वैदिक आर्यवर्तको केन्द्रबिन्दु मानिन्छ । वाल्मीकि ऋषिको आश्रमआसपासको क्षेत्र रामनामसँग जोडिएर कालान्तरदेखि परिचित हुँदै आएको हुँदा भारतले मानेको अयोध्यामा होइन, ठोरीस्थित अयोध्यापुरी रामको जन्मस्थल हो भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि हुन्छ । हिमवत् खण्डलाई पनि प्राचीन साहित्यमा भारतीय लेखकहरुले नेपाल खण्ड, कुमाउ खण्ड, काश्मीर खण्ड, केदार खण्ड र जालन्धर खण्ड भनी पाँच खण्डमा विभाजित गरे ।
यस क्रममा भारतीय लेखकहरुले आफ्नो पुस्तकमा आफ्नै भूमिलाई विशेष मह¤व दिँदै आए । अहिले प्रचलनमा आएका रामायण र वेदमा उल्लिखित कुराहरु पनि वास्तविक रचनाकारकै शब्दका होइनन् । त्यसबाट प्रभावित बन्दै आएका पछिका अनुसरणकर्ताले नै यसलाई परिमार्जित गराउँदै लिपिबद्ध गराएका हुन् । रामायण एक महाकाव्य हो । यो महाकाव्य एसियाको भारत वा नेपालमा नै लेखिएको थियो भन्ने ऐतिहासिक कुनै प्रमाण छैन । त्रेतायुगका राम कुनै ऐतिहासिक पुरूष नभई एउटा महाकाव्यका नायकमात्रै हुन् । त्यसैले, ऐतिहासिकरुपमा प्रमाण नै नहेरी राम वा सीता कहाँका हुन् भन्ने चर्चा गर्नु विज्ञानवादी हुन सक्दैन । स्वयम् सीता हालको जनकपुरधाममा जन्मिएकी थिइन् भन्ने यथेष्ट प्रमाण केही छैन । जानकी मन्दिर पनि टिकमगढकी महारानी भृष्म भानुले मुगल शैलीमा निर्माण गराएपछिमात्रै यसलाई जनकपुरधाम भन्न थालिएको थियो ।
सत्रौँ शताब्दीसम्म यो स्थान घना जंगलका रुपमा रहेको थियो । जनकपुरका राजा जनकले जनकपुरको दरबारसमेत यसभन्दा पूर्वको वंशशिवपुरको शिवगढीमा निर्माण गराएका थिए, हालको जनकपुरधाममा होइन । भनिन्छ, सत्रौँ शताब्दीमा मिथिला महात्म्यमा उल्लेख भएको आधारमा लोहागढका सन्तु शूरकिशोरले यो सीताको जन्मस्थानको पहिचान गरेका थिए र त्यसबेला रामको मन्दिर रहेको थियो । यो क्षेत्रमा सन् १७२७ मा मकवानपुरे राजा मणि सेनले दर्शन गर्न आएको तथा १४ सय बिघा जमिन चढाएका थिए भनिन्छ ।
रामायणका रचयिता वाल्मीकिले आफ्नो समयको कुनै प्रतापी राजालाई राम र उसको विपक्षीलाई रावणको रुपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । यो आध्यात्म रामको रचयिता वालिक वंशका रत्नाकारले गरेर आफूलाई ऋषित्व प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । तर, धेरै मतका कालिदासका राम भगवान् श्रीराम नभई गुप्त नरेश राम गुप्त थिए । र, उनलाई नै रामका रुपमा वर्णन गरेका थिए । इन्डोनेसियाका मुसलमानहरुले समेत रामलीलालाई मानेको देख्दा त्यहाँसम्म रामको लीलालाई पु¥याउने आग्नेय मानव थिए । थाइल्यान्डमा समेत अयोध्या भन्ने स्थान रहेको छ र त्यहाँको विभिन्न सडकको नाम लामालोड भनिन्छ । तर, यो रामायणको कथाको नभई स्थानीयकरण भएको बुझिएको छ ।
अयोध्यापुरीनजिकको सरयू नदीको नाम पनि पछि नारायणी, राप्ती या माडी भनी परिवर्तन भएको हुन सक्छ । अथवा, भारतीय सरयू नदी कल्पनामा आधारित थियो र पछि नामकरण गरेको पनि हुन सक्छ । यथेष्ट प्रमाण संकलन गरी अयोध्यापुरीलाई रामको जन्मभूमिमा परिणत गर्न सकिन्छ । ऐतिहासिक मह¤व बोकेको आश्रमआसपासमा धेरै पौराणिक कुरा पाइन्छन् । अमृत कुवा छ । लवकुशले घोडा बाँधेको खम्बा छ । सीताले प्रयोग गरेको सिलौटो छ । यहाँ आएका आगन्तुक सिलौटो पिसेको तस्बिर लिएरमात्रै जाने गरेका छन् । नजिकै वाल्मीकिको समाधिस्थल छ । लवकुशको जन्मस्थल, शिक्षादीक्षा दिएको ठाउँ, उनीहरुले खेलेको स्थान र आकर्षक विष्णु चक्र पनि छ । वाल्मीकिले रामायण यहीँ बसेर लेखेको भनाइ छ । अठासी हजार ऋषिले हवन गरेको कुण्ड छ ।
किंवदन्तीअनुसार गर्भिणी भएर वाल्मीकि आश्रममा पुगेकी सीताले लवकुशलाई सो क्षेत्रमा जन्म दिएकी थिइन् । उनीहरुको शिक्षादीक्षासमेत सोही स्थानमा भएको थियो । सोही ठाउँबाट सीता पातल भासिएको भन्ने भनाइसमेत छ । सीता आउनुको पनि छुट्टै कथा छ । लङ्काबाट रावणलाई जितेर फर्किएपछि केही समय रामराज्य चल्यो । रामले जनतालाई केही समस्या छ कि भनेर बुझ्न गाउँमा दूत पठाए । एउटा धोबीले नसोधी माइत गएकी श्रीमतीलाई कुट्दै गएको दूतले देखेछ । म रामजस्तो हो, हरण गरेपछि पनि चोखी छ भनेर ल्याउने ? भनेर कुटेको दृश्य दूतले रामलाई सुनाएछ । त्यसपछि रामले गर्भिणी सीतालाई निकालेपछि वाल्मीकि आश्रम आएको किंवदन्ती रहेको छ ।
त्यसबेला चलेको नेपाली मानसिकताअनुसार कुनै मह¤वपूर्ण विषयलाई आफ्नै बनाएर स्थानीयकरण गर्ने परम्परा रहेको हुँदा ठोरीको अयोध्यापुरी क्षेत्रमा भएको सानो गाउँमा रघुवंशका प्रजाति राजा थिए र उनले लङ्कामा समेत विजय प्राप्त गरेका थिए भन्ने कुरा देखिँदैन । त्यसैबेला त्यहीँ रहेको सुमेरू शिखरनजिक सीताको गुफा भएकाले राम र सीता एकै स्थानमा जन्मिएको कुरा पत्यारलाग्दो देखिँदैन । चितवनमा जनकले हलो जोतेको स्थान परिकल्पना गरिएको देखिएको हुँदा, त्यहाँको नाम अयोध्यापुरी भन्नु र रामायणमा उल्लेख भएको प्रसिद्ध नामलाई आफ्नै गाउँ भन्नु कुनै नौलो विषय होइन ।
वैदिक सनातन धर्म र सभ्यता संसारमा जीवित रहेका सभ्यतामध्ये प्राचीनतम सभ्यता हो । संसारभरका हिन्दुहरुले रामायणकालदेखि नै रामजन्मभूमि अयोध्यालाई पावन तीर्थ मान्दै आएका छन् । पुण्य सलिला सरयूमा स्नान गर्दै आएका छन् । रामको जन्मदेखि वर्तमानसम्म अविच्छिन्नरुपमा अयोध्या हिन्दुहरुको धार्मिक आस्थाको केन्द्र रहँदै आएको छ । जैन र सिख धर्मावलम्बीहरु पनि अयोध्यालाई पवित्र भूमि मान्दछन् । [ [email protected] ]